ဂမ်လန်ရာဇီ အနီးတဝိုက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | Climb O'Clock
← Let’s Crimp 1
“Because it’s there” ……..George Mallory →
September 5, 2013 at 4:31pm
ယနေ့ ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ရဲ့ အနီးတဝိုက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်ကို ဘာသာပြန်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်. 😀
ဂမ်လန်ရာဇီ အခြေခံစခန်းးအမြင့်ပေ တစ်သောင်းနှစ်ထောင် (၁၂၀၀၀) -၆၅၀/ဟက်တိုပါစကယ်/မီလီဘား
ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ပေါ် စခန်း၁ :အမြင့်ပေ တစ်သောင်းခြောက်ထောင့်ငါးရာ (၁၆၅၀၀ ) – – ၅၅၀မီလီဘား
ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ပေါ် စခန်း၂ :အမြင့်ပေ တစ်သောင်းရှစ်ထောင် (၁၈၀၀၀ ) – – ၅၀၀မီလီဘား
ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ထိပ်နှင့် အနီးဝန်းကျင် : အမြင့်ပေ တစ်သောင်းကိုးထောင် (၁၉၀၀၀) – ၄၅၀မီလီဘား
(ပုံမှန် ရေပြင်ညီရဲ့ လေထုဖိအား စံသက်မှတ်ချက်က ၁၀၁၃မီလီဘား(သို့မဟုတ်)/ဟက်တိုပါစကယ် ရှိပါတယ်။ ဤကားစကားချပ်။)
ရာသီဥတုက ကျန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ ဆိုးခဲ့ပေမဲ့ ၅ရက်နေ့စလို့ ပိုပြီးကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်တဲ့၊
ဒါပေမဲ့လည်း မထင်မှတ်ပဲ မိုးရွာချတာ ဆီးနှင်းကျတာတွေဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါသေးတယ်တဲ့ လေတိုက်နှုန်း အနေနဲ့ကတော့ အမြင့်ပေအနိမ့်ပိုင်းတွေမှာ လေတိုက်နှုန်း အားပျော့မှာ ဖြစ်ပြီး တောင်ပေါ်အမြင့်ပိုင်းတွေမှာ လေတိုက်နှုန်း အားပျော့ရာမှ အသင့်အတင့်ရှိပါမယ်၊
(လေတိုက်နှုန်းဟာ အားကောင်းလာဖွယ်ရာမရှိပဲ တဖြည်းဖြည်း အားပျော့သွားဖွယ်ရာရှိပါတယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ် တဲ့)။
ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်တက်ရက် တရက်ချင်းစီရဲ့ အသေးစိတ် တောင်ပေါ်မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်ကတော့
ယနေ့ ၅ရက် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃
ရာသီဥတု- တိမ်ထူထပ်/မိုးအနည်းငယ်ရွာ/နှင်းကျ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ၆နာရီနောက်ပိုင်းရာသီဥတု ကြည်လင်နိုင်
စခန်း၁ လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်လေ တစ်နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင်နှုန်း (၁၀နော့) အပူချိန်းသုံညဒီဂရီ (ရေခဲမှတ်)
စခန်း၂ လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်လေ တစ်နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင်နှုန်း မှ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင်နှုန်း (၁၀-၁၅နော့ ) အပူချိန်းအနှုပ် ၃ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၃ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
တောင်ထိပ်နှင့် အနီးဝန်းကျင် : လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်(အနောက်ဒေါင့်)လေ တစ်နာရီ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင်နှုန်း မှ ၂၃မိုင် (၁၅-၂၀ နော့) အပူချိန်းအနှုပ် ၈ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၈ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
မနက်ဖြန် ၆ရက် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃
ရာသီဥတု- နေရာကွက်ကြား နေသာဖွယ်/မို:အုံ့ဖွယ်/မိုးကွက်ကြားရွာဖွယ်ရှိ
စခန်း၂ လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်လေ တစ်နာရီ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင်နှုန်း (၁၅နော့ ) အပူချိန်းအနှုပ် ၄ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၄ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
တောင်ထိပ်နှင့် အနီးဝန်းကျင် : လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်(အနောက်ဒေါင့်)လေ တစ်နာရီ ၂၃မိုင် (၂၀ နော့) အပူချိန်းအနှုပ် ၉ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၉ ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
၇ ရက် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃
စခန်း၂ လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်လေ တစ်နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင်နှုန်း မှ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင်နှုန်း (၁၀-၁၅နော့ ) အပူချိန်းအနှုပ် ၅ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၅ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
တောင်ထိပ်နှင့် အနီးဝန်းကျင် : လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်(အနောက်ဒေါင့်)လေ တစ်နာရီ ၂၃မိုင် (၂၀ နော့) အပူချိန်းအနှုပ် ၁၀ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၁၀ ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
စခန်း၁ လေတိုက်နှုန်း- အနောက်တောင်လေ တစ်နာရီ ၅ဒသမ၇၅မိုင်နှုန်း (၅ နော့) အပူချိန်းအနှုပ် ၁ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၁ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
စခန်း၂ လေတိုက်နှုန်း- အနောက်လေ တစ်နာရီ တစ်နာရီ ၅ဒသမ၇၅မိုင်နှုန်းမှ ၁၁ဒသမ၅မိုင်နှုန်း (၅-၁၀ နော့) အပူချိန်းအနှုပ် ၅ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၅ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
တောင်ထိပ်နှင့် အနီးဝန်းကျင် : လေတိုက်နှုန်း-အနောက်လေ တစ်နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင်နှုန်း မှ ၁၇ဒသမ၂၅မိုင်နှုန်း (၁၀-၁၅နော့ ) အပူချိန်းအနှုပ် ၁၀ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၁၀ ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်) St:W10-15kt/Tmp:-10C
၉ ရက် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃
တောင်ထိပ်နှင့် အနီးဝန်းကျင် : လေတိုက်နှုန်း-အနောက်လေ တစ်နာရီ ၁၁ဒသမ၅မိုင်နှုန်း (၁၀ နော့) အပူချိန်းအနှုပ် ၁၀ ဒီဂရီ (ရေခဲမှတ် အောက် ၁၀ ဒီကရီ စင်တီဂရိတ်)
(လေတိုက်နှုန်း ယူနစ် ၁နော့ = ၁ဒသမ ၁၅မိုင် ) (လေထုဖိအား ယူနစ် မီလီဘား= ဟက်တိုပါစကယ်)
Credit to : Marc De Keyser weather.thisconnect.com မှ ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
(မိုးလေဝသ ရာသီဥတုအခေါ်အဝေါ်တွေ မကြွမ်းကျင်တဲ့ အတွက် အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်)
ဘာသာပြန်အမှားတွေ့ပါက အားမနာတမ်း ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Satellite Image of Gamlang Razi ( cridit to Steve)
First Image of Gamlang Razi base Camp dispatch by Andy Tyson ( via Satellite Phone)
This entry was posted in Gamlangrazi, Trip Forecast, Weather and tagged Gamlang Razi, Myanmar Climbing, Weather Forecast. Bookmark the permalink.